Fakafaka: mivelatra fa tsy mielatra ! | NewsMada
Fakafaka: mivelatra fa tsy mielatra !
Par Taratra sur 02/04/2019
Manana ny mampiavaka azy ny kolontsaina malagasy. Na manana faka eto Madagasikara aza ny ankamaroan’izy ireny, tsy takona afenina fa ny sasany amin’ireo, mora hozongozonina. Hatreto, zary mifantoka hatrany any amin’ireny kolontsaina voahozongozona ireny ny hafanampo ananan’ny Malagasy. « Andao hasongadina ny maha Malagasy », « andao tadiavina ny very », sns. Tahaka izany ny miverimberina.
Toa tsy tazan’ny Malagasy loatra fa misy kolontsaina mielatra ao ambadika ao. Izy ireny aza no zary ilomanosan’ny olona kokoa no ho ilay tsara fototra. Fomba fisainana, fomba fiakanjo, fomba fiteny, fihetsika hoenti-manaja, sns, samy mielatra avokoa, saingy mitady hahazo faka lalina. Manana fiantraikany amin’ny tsirairay sy ny fiarahamonina iray manontolo anefa izy ireny.
Tsy azo sakanana, « hono », io endrika kolontsaina mielatra io. Raha jerena amin’ny ankapobeny, mety ho marina ihany izany… Fa raha tazanina ifotony, diso tanteraka io fehezanteny io. Raha nampahafantarin’ireo raiamandreny amin’ny taranany ve fa « tsy fombantsika ny miboridandridana eo imason’olom-pady », ho sahy hanao izany ny tovovavy malagasy ? Ilaina ny kolontsaina mivelatra fa tsy hoenti-manamaivana na manimba na manova ny an’ny Malagasy akory izy ireny.
Raha mbola matimatin’ireny kolontsaina mielatra ireny ny Malagasy, azo antoka fa hielatra, hanaraka izany, ihany koa ny maha izy azy manontolo an’i Madagasikara. Mila manatanteraka ny adidy aman’andraikiny ny raiamandreny, indrindra fa ny ray aman-dreny loharano nipoirana mampahafantatra ny tena maha izy azy. Fa raha mbola mihalangalana sy mitazam-potsiny manoloana ny kolontsaina mielatra mitady hahazo vahana eto Madagasikara izy ireo, ho difotry ny manidintsidina ity Nosy ity. Very faka, very fototra !